I-PVC VS DECKING EDIBENEYO (UMAHLUKO KUNYE NEPROSES KUNYE NENGXELO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi I-PVC vs Decking edibeneyo (Umahluko kunye neProses kunye neNgxelo)
Nasi isikhokelo sethu kwi-PVC vs ukudibanisa kokudityaniswa kubandakanya ubuchule babo kunye neengozi, umahluko weendleko, iwaranti kunye nokuba zeziphi iintlobo zeedeksi ezilungileyo.
Idiski ibonelela ngendawo entle yokundwendwela kunye nosapho kunye nabahlobo, ube ne-barbecue, kwaye uyonwabele ikofu yakho yasekuseni. Ngokwesiko, iidesika zazisenziwa ngomthi zaze zafakwa nebala leoyile ekumgangatho ophezulu.
Nangona kunjalo, i-composite kunye ne-PVC, zombini ezi zinto zenziwe ngokhuni, zikhawuleza zithengise iinkuni xa abaninimzi bekhetha ukufakela ipaki eyadini yabo okanye ngaphambili kwendlu yabo. kwiminyaka ezayo.
I-PVC kunye nezinto zokuhombisa ezidityanisiweyo zilondolozo olusezantsi, zihlala ixesha elide. Zombini ezi zixhobo zimi kakuhle kubushushu belanga elishushu, ubusika obubandayo kunye nemozulu embi.
Azikho iidesika ezimbini ezifanayo, kwaye izinto ezikhethwe ngumninikhaya zisekwe kwinkangeleko, uyilo, kunye nokusebenza abakufunayo kumgangatho wabo. I-PVC kunye nokuhonjiswa okudityanisiweyo kuyafana, kodwa zineyantlukwano ezininzi.
Esi sikhokelo sichaza ukuba yiyiphi i-PVC kunye nokuhonjiswa okudityanisiweyo okwenziweyo, uhlobo lolondolozo olufunekayo, ukuhlala ixesha elide, ukulunga kunye nobubi, kunye neendleko zokukunceda wenze olona khetho lufanelekileyo kwiprojekthi yakho yangaphandle.
Zithini iiBhodi zeDVD Deck?
I-PVC Decking Pros kunye ne-Cons
Yintoni indibaniselwano yokuHanjiswa?
Iinkonzo eziDibeneyo zokuDibanisa kunye neNgxelo
I-PVC vs Iindleko zokuHamba eziDibeneyo
Iinkonzo kunye neengozi zePVC vs Decking edibeneyo
Yeyiphi i-PVC engcono okanye i-Decking edibeneyo?
I-PVC imfutshane kwi-polyvinyl chloride, iplastiki eqhelekileyo esetyenziswa kwihlabathi liphela ukwenza iimveliso ezinje ngokupakisha, izinto zokwakha, iifreyimu zeefestile kunye nokuhombisa. Ukuhonjiswa nge-PVC akufani nokwenziwa kwe-vinyl. Umahluko ubalulekile phakathi kwezi zimbini.
Iibhodi zokuhombisa ze-PVC zenziwe ngezinto ezibandakanya iplastiki eyomeleleyo. IVinyl ayinakwenziwa kwiibhodi zomgangatho. Endaweni yoko, isetyenziselwa ukwenza izinto ezikhutshiweyo ezisetyenziselwa ukuthintela imozulu kumgangatho okhoyo.
Iibhodi zokuhombisa ze-PVC ziqulethe izinto zeplastiki kunye nezinto zokwenziwa kuphela. Abayi kukhuthaza ukukhula kwesikhunta kwaye bayanyamezela ukufuma. Kwaye ngenxa yokuba zingenziwanga nangazo naziphi na izinto eziphilayo, iibhodi zomgangatho wePVC ziyaxhathisa ukungena kwizinambuzane kunye nomonakalo. Kukhetho lwe-eco-friendly, iibhodi ze-PVC zihlala zenziwe ngeplastiki ehlaziyiweyo.
Iibhodi zomgangatho wePVC ziyanyibilika, azilibaleki lula, kwaye ziyamelana nelangatye. Benza imveliso ekumgangatho ophakamileyo enezithuthi ezininzi kunye nokusetyenziswa. Ngenxa yeempawu zabo ezingathinteli amanzi, kufanelekile ukuhombisa kwiindawo ezikufutshane namanzi okanye kufutshane nephuli.
Ukuhanjiswa kwe-PVC kubandakanya ubuchule kunye neengozi ezibalulekile ukuba uzithathele ingqalelo xa ukhetha izinto zeprojekthi yakho yomgangatho. Indawo yedesika kunye nenani lokusetyenziswa kwayo elichaphazelayo kwisigqibo sokukhetha into enye kwenye.
Amanzi nokubumba okumelana
Ukuxhathisa ukufiphala kombala
Akukho mzobo okanye bala lifunekayo
Ikhaphukhaphu kodwa yomelele
Amaxesha amaninzi zenziwe ngezinto ezenziwe ngokutsha
Eminye imathiriyeli enje ngerabha inokubangela umbala omdaka xa isetyenziswa kumgangatho
Ayibonakali ngathi ingumthi wendalo njengakwidesika edibeneyo
Ukuhonjiswa ngokudibeneyo kwenziwa ngokudibanisa iiplastikhi kunye nemicu yeenkuni emva koko ubumba loo nto kwiibhodi. Isizathu sokuba abavelisi baxube ezi zinto zimbini kukubonelela ngemveliso eyomeleleyo ngokongeza ifayibha yeenkuni kunye nokusebenzisa iplastiki ukukhusela iinkuni kubumanzi.
Iimpawu zokwenza izinto ngokudibeneyo zinokuqulatha izinto ezinokuphinda zisetyenziswe. Abaqambi bokuqala bezinto ezidibeneyo bazilungiselela iifestile kunye nezakhelo zomnyango.
Ukuba abavelisi bokudibanisa abadibanisi abawusebenzisi umxube ofanelekileyo wefayibha yomthi kunye neplastiki, iibhodi zinokufunxa ukufuma, zibangele ukuqhekeka, ukusonta okanye ukubola. Ukuhonjiswa okudityanisiweyo kujongeka ngakumbi njengokhuni lwendalo kunokuhombisa i-PVC kwaye kuza ngexabiso eliphezulu.
Nazi iingenelo kunye neengozi zokuhonjiswa ngokudibeneyo ukuze ubone ukuba kuthelekiswa njani nezinto zomgangatho wePVC.
Ukuhlala ixesha elide & ukuhlala ixesha elide
Ijongeka ngokwendalo ngakumbi xa kuthelekiswa ne-PVC decking
Uluhlu olubanzi lwemibala ekhoyo
Ukugcinwa okuncinci xa kuthelekiswa neenkuni
Ngaba kunokwakhiwa kusetyenziswa izinto ezirisayikilishwe
Umdibaniso ubiza kakhulu emva koko ngumthi
Ayilondolozwa ngokupheleleyo simahla
Iimfuno zokwakhiwa kwisakhelo seplanga esinyangiweyo
Imibala (ngakumbi emnyama) inokuphela ngokuhamba kwexesha
Umgangatho wazo zombini i-PVC kunye nokuhonjiswa ngokudibeneyo kuchaphazela ixabiso, kodwa ngokubanzi, ukuhonjiswa ngokudibeneyo kubiza kakhulu. Enye into ebalulekileyo ekuqwalaseleni ubude bewaranti yomenzi.
Kukho ii-brand kwixa elidlulileyo ezazifunxa ukufuma okuninzi kwaye zaqhekeka okanye zajija. Ngelixa iinkampani zinokubonelela ngembuyiselo yemali, zihlala zinganikeli ukuba zize ekhayeni lakho kwaye zisuse umgangatho onesiphene.
Iindleko, inkathazo, kunye nabasebenzi ukutshintsha ipakethe kunye neebhodi eziqhekekileyo kunye neentsimbi zingabiza ngaphezu kweendleko zeprojekthi yokuqala.
Ishati engezantsi sisikhokelo sendleko eziphakathi zePVC kunye nokuhonjiswa ngokudibeneyo, kubandakanya newaranti yohlobo. Ukuhonjiswa ngokudibeneyo kuhlala kubiza kakhulu.
Njengoko sele kukhankanyiwe, umgangatho kunye nokhetho lombala nokuba ngaba uguqulwanga okanye awenziwanga, yenza umahluko kwixabiso. Le tshathi ibonelelwa njengombono womahluko wamaxabiso phakathi kwePVC kunye nokuhonjiswa ngokudibeneyo. Izinto ezininzi, kubandakanya indawo okuyo, ziya kuchaphazela iindleko zeebhodi zomgangatho.
IBANDLE IZINTO ISIQINISEKISO SOLWAKHIWO HLAWULA KUNYE NESIQINISEKISO SOKUFA I-12 FOOT BOARD AVG PRICE
PVC Ubomi obunomda Iminyaka engama-50 $ 60 ukuya kwi-85
Ifayibha enkulu PVC Ubomi bonke Iminyaka engama-50 $ 57 ukuya kwi-65 yeedola
ITape Tech Pro Umdibaniso Iminyaka engama-30 Iminyaka engama-30 $ 40 ukuya kuma-70 eedola
Iimveliso zoKwakha zeNqaba Umdibaniso Iminyaka engama-30 Iminyaka engama-30 $ 110 ukuya kwii-75 zeedola
Funda ngakumbi malunga I-Timbertech vs Trex decking Apha.
Izinto ezimnyama zePVC nge umgangatho wedreyini .
Ngelixa kukho izinto eziluncedo kunye nezingeloncedo kuzo zombini izinto, zininzi izinto ezifanayo phakathi kwePVC kunye nokuhonjiswa ngokudibeneyo. Izinto ezifanayo zidweliswe apha ngezantsi:
Uxhathisa ukufuma nokubumba
Zombini ezi mveliso zinemibala eyahlukeneyo
Ikhaphukhaphu kune Ukuhonjiswa kweenkuni
Akunyanzelekanga ukuba iphinde igcinwe okanye ipeyintwe
Zombini i-PVC kunye nokuhonjiswa komgangatho wokudibanisa ngokulinganayo kuyanyibilika ngokusekwe kumgangatho kunye negama. Ukuhonjiswa kwe-PVC kuyinto edibeneyo ekubonakalayo, ngelixa ukudibanisa okungaphezulu kufana neenkuni zendalo.
Ukuhonjiswa ngokudibeneyo kunesiqinisekiso esifutshane kune-PVC, kwaye zombini ezi mveliso zinamabala afanayo kunye nokuphela kweziqinisekiso. Amabala avela kwizinto zokutya ezinje nge ketchup, lwemostade, iisosi, ukutya okuchithekileyo, kunye neziselo kunqabile ukuba kube nzima ukuzicoca kuzo zombini i-PVC kunye nokuhonjiswa okudityanisiweyo.
Ukugcinwa kwazo zombini i-PVC kunye neebhodi zomgangatho odibeneyo kulula. Ukutshayela, ukuxhoma phantsi kumgangatho wamanzi, kunye nokususa inkunkuma phakathi kweebhodi kugcina ideksi icocekile kwaye ijongeka ilungile.
Zombini ezi mveliso zinobuhlobo, kwaye i-PVC yenziwe ngokwenziwe ngeplastiki ehlaziyiweyo enokuphinda isetyenziswe kwakhona.
Ukuhonjiswa ngokudityanisiweyo kunokuba yinto efanelekileyo kwi-eco-friendly kodwa ihlala yenziwe ngemicu yomthi kunye neeplastiki kwaye ayinakuphinda yenziwe. Okwangoku, iinkampani ezininzi zenza ukuhonjiswa kwazo ngokudibeneyo ngezinto ezisetyenzisiweyo.
Xa kuthelekiswa nokuhonjiswa kweenkuni, i-PVC kunye nokudityaniswa kulula kwaye kulula ukuyifaka. I-PVC inobunzima obungaphezulu kokudityaniswa kwaye inokuba bounce xa isetyenziswa.
Zombini ezi mveliso zibandakanya iindlela zokufihla ukufihla ukwenza ukucoceka okucocekileyo kunye okukhazimlisiweyo kumgangatho wakho. Bona Okuninzi Izimvo zomgangatho wedolophu yangasemva Apha.
Ngokubonakalayo, iibhodi zokuhombisa ze-PVC zinobume bomhlaba obunepateni yomqolo yomqolo yomgama. Ukudibanisa okudityanisiweyo kudla ngokuba nomgangatho womphezulu owenziwe ngomzekelo weenkozo zomthi.
Ngelixa ezinye izinto zinokukhethwa, ukuhonjiswa ngokudibeneyo kudla ngokukhangeleka ngokungathi ngumthi wendalo. I-PVC inokuba nokuthungwa okungaphezulu komthi, okunokwenza ukuba kujongeke ngakumbi.
Zombini i-PVC kunye nabenzi bebhodi yomgangatho weplanethi banikezela ngeebhodi ezininzi zeetoni okanye ezinemigca ukujonga ngakumbi kwendalo.
Abavelisi banikela nge-PVC kunye nokudityaniswa kweemibala eyahlukeneyo kunye noburhabaxa. Umbala uhlala ixesha lokuphila kwedesika kuba zombini i-PVC kunye nokuhonjiswa okudityanisiweyo akunakupeyintwa okanye kungcoliswa.
Kwiindawo apho kukho amanqanaba aphezulu emvula okanye ukuba kwakhiwa indawo esemgangathweni esetyenziswa emanzini, njengechibi okanye umlambo, i-PVC lolona khetho lulungileyo. I-PVC ingaphezulu kokunganyangekiyo kwamanzi kunye nokuchasana nokungunda kunokudityaniswa.
Umahluko phakathi kwePVC kunye nokuhonjiswa ngokudibeneyo bambalwa. Ukhetho lomninikhaya lokuthambisa izinto luxhomekeke kumgangatho webranti nganye, imibala, kunye nokukhetha.
Ukufaka idikki eyadini ayisiyonto yokwenza kuphela ulwakhiwo; ukhetho loyilo, imilo, kunye nenjongo zinokuchaphazela uhlobo lweebhodi zomgangatho. Ukuba unomdla wokwenza uyilo lwakho lomgangatho unokufumana olona lwazi luthandwayo Iinkqubo zesoftware yoyilo kweli phepha.
Ukwazi izinto ezilungileyo nezingalunganga, kunye nezinto ozikhethayo zinokukunceda uthathe isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwezinto ezilungileyo kwiprojekthi yakho.
Yeyiphi eyona uyithandayo xa kufikwa kwiPV vs decking decking? Sazise kumagqabantshintshi ukuba sabelane ngeengcinga zakho.
truss vs umqadi
izinto zokwenza ubusuku bomhla
ngubani onika umtshakazi into eboleke into eblue